कतारमा एक नेपालीलाई मृ’त्युद’ण्ड’को स’जाय ! यस्तो छ का’रण - Alert Khabar
Homeमनोरञ्जनकतारमा एक नेपालीलाई मृ’त्युद’ण्ड’को स’जाय ! यस्तो छ का’रण
युएई । छोटो समयमा नै कतारमा एकजना नेपा’लीलाई मृ’ त्युद’ ण्ड दिइएको छ ।महोत्तरीको औराही–१,का अनिल चौधरीलाई गो’ली हा नी मृ’त्युदण्ड दिइएको हो । चौधरीलाई कतारी नागरिक उमैर मोहम्मद उमैर अल रमाजानी अल–नुयमीको ह’त्या’को अभि योगमा दो षी ठहर गर्दै अदा लतले मृ’त्युदण्’डको फै सला सुनाइएको थियो। तल्लो अदा’लतको फैस’लालाई सर्वोच्च अदालतले पनि अनु मोदन गरेपछि जे’ल प्र’शासनले मृ’त्युदण्ड’लाई कार्यान्वयन गरेको हो।
उनले नुयमीमा’थि द’र्जनौं प टक खुकु’री प्र’हार गरेको उल्लेख छ । ह’त्या गरेको अभियो गमा उनलाई सन् २०१७ अप्रिलको पहिलो ह’प्ता प’क्राउ परेका थिए। चौधरीलाई मृ’त्युदण्’ड दिइएकोबारे कतारस्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराइएको छ। नेपाली दूतावास दोहाले काठमाडौंस्थित कन्सुलर विभागमा यसबारे जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । कतार सरकारले उनको श’व नेपाल ल्याउन अनुमति दिएको बताइएको छ ।
नेपालीद्वारा कतारी नागरिकको ह’त्या गरिएको यो नै पहिलो घ’टना हो ।भने कतारमा नेपालीलाई मृ’त्युद’ण्ड दिइएको पनि यो पहिलो हो । कतारमा नेपालीद्वारा नेपालीकै ह’त्या अभि योगमा १० ज ना जेल मा छन् ।कतारमा मृ’त्युद’ण्ड पाएका नेपालीहरु अरु पनि भए पनि उनीहरुको मृ’त्युद’ण्डको स’जाय का र्यान्वयन भइसकेको छैन । चौधरी २०१५ अगष्ट २७ गते कतार गएका थिए । क्लिनिङ कम्पनीमा सामान्य मजदूरको हैसि यतमा काम गर्थे । उनलाई केन्द्रीय कारगारमा राखिएको थियो ।